SIR LA HELAY: Shirkad ajnabi oo ukala dab-qaado maamullada dalka iyo Imaaraadka? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SIR LA HELAY: Shirkad ajnabi oo ukala dab-qaado maamullada dalka iyo Imaaraadka?
SIR LA HELAY: Shirkad ajnabi oo ukala dab-qaado maamullada dalka iyo Imaaraadka?
Galmudug ayaa ka dalbatay Shirkad ajnabi oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka inay inay ka gacan siiso islamarkaana usoo faregliso heshiiska maamullo kamid ah maamul goboleedyada dalka ay la galeen wadanka Imaaraadka Carabta.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf, ayaa warqad u qoray 5-tii bishan agaasiimaha guud ee shirkadda Levant Suez Consulting corporation, oo lagu magacaabo Thomas B. Coleman, taasi oo loogaga codsanayay inuu u kala dab-qaado Imaaraadka iyo maamullada kala ah Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed, oo dhawaan la saftay xulufada sacuudiga.
Warqadda oo nuqul kamid ah ay heshay Warbaahinta , ayaa lagu sheegay in saddexda maamul goboleed ay ka doonayaan dowladda Imaaraadka lacag gaaraysa 15 Million oo Dollar bil walba, mudo 12 bilood ah.
Lacagtan ayaa waxay maamullada Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed ay doonayaan in Shirkadan ay u fududayso sidii ay ku heli lahaayeen, islamarkaana si siman loogu qeybin lahaa.
15-ka milyan, ayaa waxay maamullada doonayaan in ku bedeshaan xiriirka ay u jareen Qatar, waxayna qaraalka Galmudug u dirtay Shirkadda Levant Suez Consulting corporation, in dhaqaalahan uu lagama maarmaan u yahay shaqooyinka maamul goboleedyada taageeray Sacuudiga iyo xulufadiisa.
Shirkadda Levant Suez Consulting corporation, ee lo diray qoraalka ayaa ah mid qaabilsan dhinaca fududeynta heshiisyada caalamiga ah, iyadoo siisa maamullada soo koraya talooyin dhanka maamulka ah.
Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay sheegeen in go’aanki dhex-dhexaadnimada dowladda Federaalka ee ku aadan arrimaha khaliijka uusan ku jirin danahooda dhaqaale, sidaasi darteedna ay hareer mareen, iyagoo la saftay Sacuudiga iyo Imaaraadka carabta.